आमाकै प्रेमीबाट ७ वर्षसम्म छोरीको बलात्कार, यस्तो छ दर्दनाक कथा – PathivaraOnline
Home > समाचार > आमाकै प्रेमीबाट ७ वर्षसम्म छोरीको बलात्कार, यस्तो छ दर्दनाक कथा
आमाकै प्रेमीबाट ७ वर्षसम्म छोरीको बलात्कार, यस्तो छ दर्दनाक कथा
admin August 30, 2018 समाचार	0
एजेन्सी । आफ्ना सन्तानका लागि आमा बाबुले आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन्छन्। तर यहाँ यस्ती आमा फेला परिन् जसले छोरीलाई आफ्नै प्रेमीबाट बलात्कार गराउँछिन्। जुन महिलाले आफ्नै छोरीमाथी ति प्रेमीलाई ७ वर्षसम्म बलात्कार गर्न सघाई रहिन्।
ती महिला छोरीकै आगडि सम्बन्ध राख्थिन् र छोरीसँग पनि सम्बन्ध राख्न लगाउँथिन्। जब छोरीले अटेर गर्थिन् त उनलाई आफ्नै आमा र आमाको प्रेमी मिलेर कुटपिट गर्दथे। उनका बाबु पनि आमाको सबै कर्तुत थापा पाएर नै आमाबाट टाढिएका थिए।
यसपछि आरोपितले ती बालिकाको जवरजस्ती विवाह पनि गराईदिए। केही बहानामा ती बालिका घरबाट बाहिर निस्किईन् र आफ्नी साथीलाई सबै कुरा भनेर मद्दत गर्न आग्रह गरिन्। उनीहरु मिलेर यस विषयमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए। जसको फल स्वरुप बालिकाकी आमा र उनका प्रेमी पक्राउ परे।
पीडित बालिकाले बताए अनुसार उनलाई सन् २०१२ सालभन्दा पहिला उनकी आमाको टेम्पो चालकसँग नाजायज सम्बन्ध थियो। यसपछि रविन्द्र कुमार नाम गरेका व्यक्तिसँग अफेयर भयो। यसै कारणले आमा र उनका बाबुको दिनदिनै जसो झगडा हुन थाल्यो । त्यसपछि उनका बाबु आमाबाट अलगै बस्न थालेको पनि अहिले ८ वर्ष पुगिसकेको छ।
बालिकाले भनेकी छन् आमा र आरोपित मेरै अगाडि सम्बन्ध राख्दथे । २०१२ सालमा चार पाँच महिनापछि जब आमा घरमा थिईन् त्यही समयमा उ घरमा आयो र मलाई बलात्कार गर्यो । कसैलाई भनिस् भने तँ र तेरी आमा दुबैलाई हत्या गर्छु भन्यो । मैले आमा आउने बित्तकै सबै कुरा भने तर आाले चुप लागेर बस् भनिन्।
यसपछि आमाले पनि ऊ सँग सम्बन्ध राख्न दबाब दिन थालिन् । पीडित बालिकाले बताए अनुसार ७ वर्षसम्म बलात्कार गर्दा ७ पटक गर्भवती भएँ तर ७ पटक नै आमाले अप्रेशन गराएर फालिन्।
सुनसरीमा १३ बर्षिय बालिकामाथि अर्काे बलात्कार : पिडित परिवारलाई दैनिक ज्यान मार्ने धम्की
मोदीले भाषणले उब्जायो विवाद, सामाजिक सञ्जालमा सुरू भो बहस (भिडियो)
कोरोना त्रासमा राजधानी, राजधानीबाट बाहिरिने क्रम ह्वातै बढ्यो, एकै दिन ९० हजार बाहिरिए
दलित भन्दै यसरि यातना दिएपछी
यि सुन्दरी बैँकर बेहुली बनेर आफैं जन्ती लिएर बेहुलाको घर पुगीन्, त्यसपछि यस्तो भयो
यसरी एकाएक सम्झनालाई ३ जना युवकले संगै लागेका थिए …
०७७ साल फागुन १९ गते बुधबार, हेर्नुहाेस् राशिफल अनुसार तपाईहरूको भाग्यफल यस्तो छ…
एकसाथ तीनवटा विधामा ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’मा नाम राख्दै पुण्य गौतम!
कमाउन गएको छोरो काठको बाकसमा फर्कियो! अमेरिका सेनामा कार्यरत एक गोर्खालीको मृ:त्यु !
साथीको विवाहमा गएका युवकको यसरी गयो ज्यान, ल खे टेर यस्तो सम्म गरेका रहेछन (भिडियो सहित)